Dab aan la ogeyn cida kicisey oo ka holcaya degaano iyo keymo ku yaalla Israel Daawo Sawirro dheeraad ah!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Dab aan la ogeyn cida kicisey oo ka holcaya degaano iyo keymo ku yaalla Israel Daawo Sawirro dheeraad ah!!
Dab aan la ogeyn cida kicisey oo ka holcaya degaano iyo keymo ku yaalla Israel Daawo Sawirro dheeraad ah!!
Nov 25, 2016WARAR
Dab aad u xoogan ayaa ka kacay qeybo ka mid ah Israel, iyadoo kooxaha dab demiska ee Israa’iil ay sheegeen iney xakameeyeen dab ka kacay agagaarka magaalada woqooyiga ku taalla ee Haifa.
Ku dhawaad sideetan kun oo qof ayaa laga daadgureeyay meelaha uu dabka saameeyay, iyadoo dabkan uu weli ka holcaaya dhowr degaan oo ka tirsan Israa’iil isagoo khatar ku haya guryaha ku yaalla afaafka magaalada Qudus qaar ayba gubteen.
Dabkan oo hadda galay maalintii saddexaad ayaa waxaa demintiisa ka qeyb qaadanaya dayuurado iyo gaadiid fara badan, waxaana xusid mudan in kooxaha ka qeyb qaadanaya deminta dabkaasi ay ka mid yihiin kuwo Falastiiniyiin ah oo ka tagay Daanta Galbeed kuwaas oo laxarbinaaya qayb kamid Falastiininta deengaankooda oo dabyar gaaray.
Booliska Yuhuuda ayaa sheegay iney dhowr qof u qabteen tuhun la xiriira inay dabka kiciyeen, kuwaasoo baaritaano kala duwan ay ku socdaan.
Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu, ayaa Khamiistii sheegay in haddii ay cadaato in dabka si ula kac ah loo huriyay ay taasi ka dhigan tahay fal argagixiso oo lagu dhaqaaqay, isagoo xusay in la ciqaabi doono cidii lagu helo.
Previous PostSarkaal ka tirsan ciidamada dowlada oo caawa lagu weeraray Muqdisho & khasaare ka dhashay!! Next PostMUUQAAL: Madaxwaynaha Turkiga oo ku Hanjabay Inuu Qaxootiga Kusii Dayn Doono dalalka YURUB iyo Xiisad Cusub DAAWO!!